Ordinary Joe Season 2: Daty famoahana: Izay rehetra tokony ho fantatrao! - Fialam-Boly
Ordinary Joe Season 2: Daty famoahana: Izay rehetra tokony ho fantatrao!
Ordinary Joe Season 2-Ny vanim-potoana voalohany an'i Ordinary Joe dia tokony hifarana amin'ny NBC amin'ny alatsinainy 24 Janoary.
Ny fandaharan'asa, izay misy an'i James Wolk ho Joe Kimbreau mitondra ny lohateny hoe, dia manaraka ilay lehilahy amin'ny zava-misy telo hafa. Tamin'ny voalohany, nanaraka ny dian-drainy i Joe ka lasa polisy, tamin'ny faharoa, nanohy ny faniriany ho mpihira izy, ary tamin'ny fahatelo dia nanambady ny fitiavany ny oniversite izy ary lasa mpitsabo mpanampy.
Hanontany tena ny mpankafy raha nohavaozina ho an'ny vanim-potoana faharoa ny fandaharana amin'izao hifarana ny voalohany.
Havaozina amin'ny vanim-potoana faharoa ve ny ‘Ordinary Joe’?
Matt Reeves , izay miasa amin'izao fotoana izao amin'ny voalohany nataon'i Robert Pattinson ho Caped Crusader ao amin'ny The Batman, no mpamorona ny Ordinary Joe.
Tamin'ny taona 2006 no nanoloran'i Reeves ny seho voalohany tamin'ny ABC, saingy tsy novolavolaina mihitsy izany, ary tamin'ny taona 2018, nanamafy ny NBC fa haka sary ilay mpanamory. Nohamafisina tamin'ny martsa 2021 fa nalaina ho andiany iray izy io.
Garrett Lerner sy Russel Friend, izay mpamokatra mpanatanteraka ihany koa, no niara-namorona ilay fampisehoana, izay misy fizarana 13.
Nisy namana iray nilaza tamin'ny TVLine fa ny olona ao ambadiky ny sehatra dia manantena fa ny laharan'ny fandaharana ao amin'ny Hulu sy ny sehatra streaming Peacock an'ny NBC dia handresy lahatra ny tambajotra hanavao izany.
Mikasika ny mety hisian'ny vanim-potoana faha-2, dia nilaza izy hoe: Miandry ny handre avy amin'ny tambajotra izahay, mazava ho azy, ary miezaka ny hamantatra ny ataonay amin'ny streaming.
Manantena izahay fa hanaparitaka ny vaovao fa ny fizarana 13 amin'ny fandaharana dia ho azo jerena ao amin'ny Hulu sy Peacock manomboka ny alatsinainy. Manantena izahay fa hahita ny fandaharana ao amin'ny Netflix ny olona. Fampisehoana tena mendrika tokoa izany.
Noho izany dia manantena izahay fa rehefa mivoaka ny fizarana 13 rehetra, dia ho afaka hitsambikina sy ho voafandrika ireo izay tia ny andiany.
Nanohy ny teniny izy fa raha mandeha tsara amin'ny serivisy streaming ny programa dia hanampy amin'ny fanavaozana azy io mandritra ny vanim-potoana faharoa, saingy tsy ho fantatr'izy ireo mandritra ny volana maromaro na havaozina na nofoanana.
Ao amin'ny Rotten Tomatoes, Ordinary Joe dia manana naoty fankatoavana 50%, ary araka ny TV Series Finale, ny fandaharana dia manana salan'isa 0.32 eo ho eo amin'ny demografika 18-49 ary mpijery 2.3 tapitrisa amin'ny naoty mivantana sy andro iray ihany.
Vanim-potoana faha-9: Daty Famotsorana: Sata Fanavaozana & Fanafoanana amin'ny 2022!
Daty Famotsorana Lahatsoratra Kanye: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao!
Daty famoahana Sniper Elite 5: Trailers sy izay rehetra tokony ho fantatrao!
Raha jerena ny isa mahantra dia tsy azo antoka raha mety tsara amin'ny Peacock na Hulu izy io mba hiantohana ny vanim-potoana faharoa, fa ny NBC dia tsy mbola nanao fanehoan-kevitra ofisialy momba izany.
Ny vanim-potoana voalohany an'ny Ordinary Joe dia handeha amin'ny NBC ny alatsinainy 24 janoary amin'ny 10/9c.
Kims Convenience Season 6: Daty famoahana: Hamafisina na nofoanana! Jereo Eto!
sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana streaming
entana maimaim-poana amin'ny roblox
ny hafa kosa sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet
ovay ny mp3 ho video youtube
maimaim-poana mijery horonan-tsary sy fandaharana ao amin'ny tele-tserasera
halo misintona tsy voasakana any am-pianarana